Fikojakojana vatosoa fikolokoloana vato - Mpanamboatra systerma madio i China, mpamatsy
Poloney Wax- Bellinwax
Ny savoka polinina Bellinwax dia savoka miaro tena manokana, natao hazavana sy hamirapiratra hatramin'ny ela izy io. Afaka mamolavola marbra sy granita, mety amin'ny vato rehetra.
PAG vovoka poloney mavo (5 fanampiny)
Vovon-tsolika fanampiny 5 ho an'ny famolahana voajanahary aorian'ny fandingana marbra, vato, travertine, paladium ary gorodona. Ilay vovoka 5 fanampiny dia tsy hoe manome hamirapiratra voajanahary amin'ny marbra fotsiny nefa tsy mamorona horonantsary, manome ny marbra ny famirapiratany voajanahary, nefa koa mahatonga ny habakabaka tsy dia zakan'ny rano sy ny loto, manamora ny fanadiovana.
Vovon-kavo mavo -YP
Ny marbra nohavaozina dia alkali sy maloto kokoa, ny vovo-poloney dia vita amin'ny karazana asidra, afaka mitana andraikitra amin'ny fanamorana ny asidra sy ny alkali ary manadio ny tampony izy io. Hatsarao ihany koa ny famirapiratan'ny marbra tsy dia mahomby aorian'ny fikosehana.